Batisa Tao Mahanoro - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Batisa Tao Mahanoro
17 octobre 2011 admin batisa, Mahanoro
Batisa tao mahanoroNanamarika ny sabata 15 Oktobra 2011 lasa teo ny famaranana ny fampianarana Apokalypsy izay notontosaina tany Mahanoro. 135 no olona niroso tamin’ny ranon’ny batisa tamin’izany, izay marihina fa niarahana tamin’ny filoha iraisam-pirenen’ny fiangonana dia ny Pasitera Mailhol sy ireo mpanara-dia azy. Any Antsohihy indray no fandaharam-potoana manaraka ny sabata faha 29 Oktobra 2011 ho avy izao raha sitrapon’Andriamanitra. Manentana antsika hatrany hanotrona ireo vahoakan’Andriamanitra manolo-tena amin’izany fotoana izany.
Toy ny isan-tsabata dia misy hatrany koa ny fiaraha-mivavaka amin’ny fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara, manerana ireo toeram-pivoriam-bavaka eto an-toerana sy any ivelany. Raha ny tetsy amin’ny fiangonana foibe Ambohimarina Itaosy, dia ny rantsana oliva no nitondra ny fisoronana. Ny loholona RAZAFINDRAKOTOSOA Benjamin kosa no nitondra ny tenin’Andriamanitra.
Navoitrany tamin’izany ny amin’ny fitiavan’Andriamanitra izay manao toy izao : « Lalim-paka ny fitiavan’Andriamanitra antsika, kanefa isika ihany koa mila maneho fitiavana aminy. Azo atao ny maneho izany fitiavana Azy izany amin’ny fifankatiavan’ny samy mpino tsirairay. Eo ihany koa ny fiheverana izay hampandroso ny asan’Andriamanitra ho lohalaharana amin’izay atao rehetra. Indrindra ny fifampivavahana satria izany no isan’ny porofom-pitiavana lehibe indrindra azo aseho amin’ny namana. Ohatra azo alain-tahaka amin’izany ny toetran’i Mosesy sy Samoela, ary Elia… »
Ny tapany hariva kosa dia notohizana ny sekoly sabata mikasika ny fanambadiana.
← Fihaonambe Apokalypsy Antananarivo
Fanolorana ireo fiara vaovao →